Kadhanni Humna Akka Qabu Yaadachiisuu Isaa 13 Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu! Namni gammadu immoo jiraa? Inni immoo faarfannaadhaan galata haa dhi'eessu. 14 Isin keessaa namni dhukkubsate jiraa? Inni jaarsolii waldaa kristiyaanaa haa waamsifatu; isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa godhaniif. 15 Kadhanni amantiidhaan godhamu kun, isa dhukkubsataa in fayyisa; gooftaan isa in kaasa, cubbuu hojjeteera yoo ta'es in dhiisaaf. 16 Yoos dhukkubattii akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti himadhaa, waliifis kadhadhaa! Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu in danda'a. 17 Eliyaas nama akka keenyaa ture; kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate, waggaa sadii fi ji'a ja'aaf bokkaan biyya sanatti hin roobne. 18 Yeroo inni deebi'ee kadhatetti immoo, waaqni bokkaa in keenne, lafti midhaan in baase. 19 Obboloota ko! Isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jal'ate, namni biraan deebisee kan isa fidu jiraachuun in ta'a. 20 Inni nama cubbamaa karaa jal'inaa irraa deebisuu kun, lubbuu du'a oolchuu isaa, baay'ini cubbuu deebi'ee akka hin argamne gochuu isaa haa beeku! Ameen.